9 Zvinhu Zvokuziva Usati Wapinza Chiso Chako Jekiseni neDermal Fillers |
Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » 9 Zvinhu Zvokuziva Usati Waita Chiso Chako Chikabaiwa neDermal Fillers
9 Zvinhu Zvokuziva Usati Waita Chiso Chako Chikabaiwa neDermal Fillers
Hurukuro ichangobva kuitika naDr. Dan Xu, Chiremba Mukuru weToronto ID Cosmetic Clinic, yakaratidza nyaya inoshamisa kuseri kweindasitiri yekushongedza. Yakaratidza kuti Dr. Xu airapa sei varwere vake.
Dr. Xu vakagovera zvimwe zvakavanzika shure kwekurapa kwakakurumbira, Dermal Fillers. Izvo Dr. Xu akazivisa nezve dermal fillers akatsanangura zvigadzirwa zvakawanda zviripo uye nzira yekutsvaga chirongwa chekurapa zvakachengeteka, izvo zvinopa mhedzisiro inogutsa.
Indasitiri yerunako inogara ichishanduka, uye dermal fillers yakakura kuita imwe yeanonyanya kufarirwa zvizorwa maitiro. Nekudaro, usati wapinda muhype, hezvino zvinhu 9 zvekuziva nezve injectable dermal fillers.
Bvunza naChiremba, kwete Selfie
Vanhu vazhinji vanoedza madigital selfies kuti vaone kuti vanozochengeta sei maitiro. Nekudaro, ma selfies edhijitari anogona kunge asiri kunyatso miririra kuti mafirita achataridzika sei, nekuti zvakawanda zvakaparadzana zvinhu zvinogona kukanganisa mafambiro anoita.
Ndokumbira ufunge kaviri usati washandisa dermal fillers isingadzokerike. Aya mafirita haagone kubviswa kana mhedzisiro isiri iyo yaitarisirwa. Sarudzo iri nani ingave hyaluronic acid marapirwo ayo anogona kudzoserwa shure, achipa rusununguko rwekuyedza kutaridzika kutsva uye kusarudza zvinotaridzika zvakanaka.
Mhedzisiro yacho inobva kuna Chiremba
Hazvina mhosva kuti imhando ipi yezvigadzirwa zvekuzadza izvo chiremba anoshandisa, mhedzisiro inoenderana nekuti chiremba anodzikisa sei njodzi, achiunza yakanakisa jekiseni mhedzisiro. Vanachiremba vepamusoro vanozove nemakore ezve cosmetic jekiseni ruzivo, pamwe neyakasarudzika aesthetic poindi yekuona.
Mafirita anogona kunge asiri iwo kugadzira kuvandudzwa kwechitarisiko. Zvakakosha kuyeuka kuti kana uchitanga kurapwa, zvinangwa zvekuvandudza zvakakwana zvinofanira kuonekwa, uye kubva kwavari chirongwa chenhanho-nhanho chinogadzirwa.
Usashandise chero Filler chete
Usangoyedza rudzi rutsva rwekuzadza nekukasika. Iva nechokwadi chekubvunza nyanzvi ine rezinesi chete. Bvunza mibvunzo nezve zvigadzirwa uye dzidza nezve mabhenefiti uye kuti zvigadzirwa zvakaedzwa uye zvakashandiswa kwenguva yakareba sei muindasitiri yekushongedza.
Iwo ekare, akaedzwa mushe mabhureki ekuzadza anogona kunge asiri kusimudzirwa zvakanyanya semafirita matsva, nekuti panogona kunge paine kukosha kwekutengesa kuseri kweaya mafirita matsva. Ita shuwa yekubvunza nyanzvi ine rezinesi kuti uone chero mhando nyowani.
Hyaluronic Acid ndiyo Yakanakisa Reversible Filler
Kuti uwane mhinduro dzakanakisisa dzekuzadza, sarudza hyaluronic acid filler seJuvederm, Belotero kana Restylane etc. Aya ndiwo mafiritsi anogona kunyungudutswa kuburikidza ne enzyme inonzi hyaluronidase.
Shandisa Mafirita Akatenderwa
Hutano Canada yakabvumidza akati wandei mhando dzemafirita akachengeteka kuti ashandiswe kumeso, miromo, uye maoko: hyaluronic acid, calcium hydroxyapatite, poly-L-lactic acid, uye polymethylmethacrylate. Zvakare, mamwe akashambadzirwa echinguvana mafirita anogona kuve nemimwe mhedzisiro inodiwa isingaperi zvakare, zvinoreva kuti majekiseni anodzokororwa haadiwe.
Kurapa Kunofanira Kuva Kuzvipira Kwakarongwa
Gara uchiziva zvibodzwa zvakazara, usati wapinda mumusika wecosmetic filler. Kuziva aesthetic uye zvibodzwa zvinangwa mushure mekubvunzana nachiremba ndiyo yakakosha nhanho yekutanga. Zvadaro, kutevera matanho akafanorongwa, munguva yakakodzera, zvakakosha kuti uwane migumisiro inodiwa.
Ita shuwa kuti derma fillers inobaiwa nanachiremba vane hunyanzvi uye vane rezinesi. Izvi zvinovimbisa kugamuchira yakachengeteka kutarisirwa uye akanakisa aesthetic mhedzisiro.
Murwere Wokutanga Akanyoresa muNerve Regeneration Clinical Study
New Ultrasound Stimulation Iyo Inoshanda Therapy yeAlzheimer's
New Kofi-Yakafuridzirwa Skincare Mask
Nyowani Bioengineered Tissue Therapeutic Kurapa Type 1...